MARA Hydroptere v2 boatgbọ mmiri na-efe efe X-Plane 10 - Rikoooo
Hydroptere v2 boatgbọ mmiri na-efe efe X-Plane 10
n'ihi na X-Plane 10.10 + Windows naanị. Cheta ịgụ akwụkwọ edere edere.
Hydroptère bụ nke mbụ ụgbọ mmiri na-agafe mmanya nke 50 mara akpụ na-akwọpụ, ya bụ 92,6 kph, mgbe ahụ, na nke 100 kph na a mgbe ná 56,3 mara akpụ (104 kph).
The Hydroptère bụ ibuo gara hydrofoil mere site French yachtsman Alain Thébault. Ya multihull hydrofoil imewe na-enye ohere na-akwọpụ-kwadoro arịa iru elu gbapụrụ ọsọ na mmiri. The imewe bụ na ahụmahụ a nso nke hydrofoil sailcraft na Thébault wuru na imekọ ihe ọnụ mbubreyo Eric Tabarly ebe ọ bụ na 1990s. On October 5, 2008 o ruru a ndekọ ọsọ nke 52.86 mara akpụ (97.90 km / h; 60.83 mph) Otú ọ dị nke a bụ ihe a mkpumkpu anya karịa 500m mkpa iji ruo eru maka ihe ukara ụwa ndekọ. On December 21, 2008, ndị Hydroptère nkenke ruru 56.3 mara akpụ (104.3 km / h; 64.8 mph) nso Fos-sur-Mer, ma capsized obere oge.
On September 4, 2009, ndị Hydroptère mebiri na chara ụwa ndekọ,-akwagide a ọsọ nke 52.86 mara akpụ (97.90 km / h; 60.83 mph) maka 500m na 30 mara akpụ nke ifufe. Na November 2009, ọ mebiri na 50 eriri mgbochi maka a amụ ka mile na a ọsọ nke 50.17 mara akpụ (92.91 km / h; 57.73 mph) na Hyères, France. (Wikipedia)
Ebe hydroptère on a amụ ka saịtị:
Menu / Ebe / kaadị (map) obodo /
Eme ka slide Hydroptère na mmiri na kpatụ elu nke n'ikuku na-amụ ka saịtị.
Ihichapụ arịlịka, họrọ on keyboard "V".
Hydroptère navigates na-atụle ọnọdụ nke ákwà ifufe banyere ndị axis nke ụgbọ mmiri, ị na-eji gị iwu nke ome osooso nke gị joystick:
Ị ga-enweta ọsọ; site lining ákwà ifufe (na ijeụkwụ "akwa largue").
Ị kwụsịtụ; site awụ akpata oyi n'ahụ ákwà ifufe (ntụrụndụ ákwà ifufe).
The ruda na-arụ ọrụ site axis yaw gị joystick.
Iji nweta otu ezigbo ọsọ na ijeụkwụ "akwa largue":
Jiri ngwá egwú "2D panel", i nwere ike dozie na efere nke ụgbọ mmiri na gị joystick (axis Rolling na pitching) na ịgbanwe mkpụbelata (axis pitching) nke kwekọrọ na ballasts nke etiti ahu ihe.
IHE: X-Plane agbachapụghị anya na mmiri na-egbochi ịkwọ ụgbọ mmiri mikpuru na mmiri. Hydroptère (v2) enweghị ngwa mgbakwunye "mgbochi mmiri / mmiri". Emere simu a ka odi nso na odi egwu.
AKW REKWỌ n'ime X-Plane 10
"Settings / ntọala / joystick § Equipement / mpaghara"
"Settings / Ijere Nhọrọ / mpụta ubi nke na-ele"
Etinye a uru gụnyere n'etiti 50 na 100 degrees.
"Settings / Ijere Nhọrọ /"
-Etinye nhọrọ Bịaruo kwa pikselụ ọkụ,
Wepụ HDR nsụgharị
Environment - Weather "na-atụ aro ụkpụrụ":
Larịị na-adịghị ike ifufe elu 01.000
Elu ebili mmiri 000.1 (ghara gafere 2.0)
Ruru elu 10.0
Real oru e ji mara Hydroptère:
The ogwe aka nke na njikọ na-guzosie ike site carbon na site resin, dị ka technology eji maka nwayọọ nke RAFALE. Ha na-gbakọọ na ghọtara site Aerospace ụlọ ọrụ.
Biko rụba ama :
N'ihi na-aga aga na nke a ekweghị arụ ọrụ, ihe ọzọ plugin (Mepụtara Sandy Barbour) ga-arụnyere.
biko gaa na https://www.xpluginsdk.org/misc_plugins.htm na ibudata ma wụnye 'CustomSBDatarefs004' plugin.
A mma na-eji ihe si OpenSceneryX n'ọbá akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ya arụnyere ma, biko gaa https://www.opensceneryx.com
Onye edemede: JP Baril